फिल्मको सेटमा शाहरुख र गौरीले मनाएका थिए सुहागरात !
Posted on July 17, 2017 by 99celebrity	फिल्मको सेटमा शाहरुख र गौरीले मनाएका थिए सुहागरात !Rate this post शाहरुख खानले बलिउडमा २५ वर्ष बिताइसकेका छन् । उनको गौरी खानसँग बिहे भएको पनि यति नै अवधि बितेको छ ।
हालै एक अन्तरवार्तामा शाहरुख खानले आफ्नो बिहे र पत्नी गौरीको विषयमा केही रोचक कुराहरु बताए । शाहरुखका अनुसार उनीहरुको सुहागरात फिल्मको सेटमा बितेको थियो ।
उनले भने, ‘जुन दिन हाम्रो बिहे थियो, त्यसै दिन म मुम्बईमा सरेको थिएँ । हामीले बिहेको रात फिल्मको सेटमा बितायौं । तर, यसमा गौरीले कुनै गुनासो गरिनन् ।’
सुरुका दुई-तीन वर्ष आफूहरुले एक अर्कालाई बुझ्न खर्च गरेको शाहरुखले बताए । अन्तरवार्तामा उनले आफ्ना बच्चाहरुको विषयमा पनि चर्चा गरे । उनले भने, ‘मेरा तीन बच्चा छन् र उनीहरु सबैको अलग-अलग कथा छ । यसै कारणले तीनै जना विशेष छन् ।’
‘आर्यन जन्मिनुभन्दा अगाडि गौरीको केही मिसक्यारेज भएका थिए । उ जन्मिएपछि केही दिनहरु मुस्किलले भरिएका थिए ।’
‘सुहानाको जन्म हाम्रोलागि विशेष थियो । हामी दुवै पहिलो बच्चाको रुपमा छोरी चाहन्थ्यौं । तर, उनी र्दुइ नम्बरमा आइन् ।’
‘गौरी चाहन्थिन् कि बच्चाहरु म जस्ता देखिउन् । त्यसैले हरेक डेलिभरीपछि उनी सोध्थिन् के बच्चाको अनुहार तिमीसँग मिल्छ ?’
‘धेरै वर्षपछि हामीलाई महसुस भयो कि तेस्रो बच्चा पनि चाहिन्छ । त्यसैले हामीले अबरामको प्लानिङ गर्‍यौं ।’
शाहरुखका अनुसार दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उनको जीवनको यादगार फिल्म हो ।
यसको कारण खोल्दै उनले भने, ‘जुन दिन हामीले दिलवाले दुल्हनिया हेर्‍यौं, त्यो गौरीको जन्मदिन थियो । हामीले घरमा एउटा पार्टी आयोजना गर्‍यौं । त्यतिबेला हामी घरमा पूर्णरुपमा सिफ्ट भइसकेका थिएनौं । घरमा विजुली जोडिएकै थिएन । त्यसैले करण जौहर र आदित्य चोपडाले मैनवत्तिहरु सल्काएका थिए ।
नेपाली फिल्मको सेटमा शाहरुख र गौरीले मनाएका थिए सुहागरात !	Post navigation
जेलमा थुनिएकी छिन् ‘करिना कपूरकी आमा’ कोही गएनन् भेट्न	जस्टिन बिबरलाई प्रहरीले किन तिरायो जरिवाना ? Search 1000+ Celebrities	Popular Posts	Recent Posts	उषा अब निर्मात्री, बन्ने भयो ‘आउँदै जादै’